Melanezia - Wikipedia
I Melanezia dia iray amin' ireo vondro-nosy telo lehibe ao amin' ny Ôseana Pasifika, izay mamorona an' i Ôseania. Ity famondronana ara-jeôgrafia ity dia toherin' ny mpahay jeôgrafia sasany, nefa ampiasaina matetika izany sy ireo firenena voakasika. Ny anarana hoe Melanezia dia avy amin' ny teny grika hoe μέλας / mélas, "mainty", sy ny hoe νῆσος / nễsos, "nosy", ka midika hoe "nosy mainty".
Sarin-tany maneho an' i Melanezia
1 Fitsinjaràm-paritra ara-pôlitika
1.1 Ny tantaran' ny fitsinjaràm-paritra
1.2 I Melanezia araka ny mahazatra
Ny tantaran' ny fitsinjaràm-paritraHanova
Taorian' ny fandehanan' i Jules Dumont d'Urville tany amin' ny faritr' i Melanezia hamantatra ny zava-misy any dia nanao soso-kevitra tamin' ny Société de géograophie tao Parisy izy tamin' ny taona 1831 momba ny fandaminana vaovao an' i Pasifika ho faritra efatra, dia:
i Pôlinezia (midika hoe "nosy maro"),
i Melanezia ("nosy mainty"),
i Mikrônezia ("nosy kely") ary
i Malezia (izay nesorina taty aoriana tsy ho ao amin' ny kôntinentan' i Ôseania).
I Melanezia araka ny mahazatraHanova
Sarin-tany maneho ny faritr' i Melanezia
I Melanezia, araka ny famaritana mahazatra, dia miendrika reni-tsipika ao avaratra sy avaratra-atsinanan' i Aostralia sy ao atsimon' i Mikrônezia. Heverina fa isan' i Melanezia ireto fanjakana na tany manaraka ireto:
Ireo fanjakana na faritany ireo dia tsy mandrafitra vondrona ara-pôlitika ranoray.
Ny teny hoe "melaneziana" dia ampiasaina amin' ny haifiteny amin' ny fitenenenana hoe "fiteny mezô-melaneziana", izay manondro zana-bondron' ny sampam-piteny ôseanianan' ireo fiteny aostrôneziana, tenenina ao Papoazia-Ginea-Vaovao sy ao amin' ireo nosy Sôlômôna.
Fizaràm-paritra any Ôseania:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Melanezia&oldid=1038639"
Dernière modification le 8 Oktobra 2021, à 07:56
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2021 amin'ny 07:56 ity pejy ity.